ဆက်သွယ်ရေးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ - ၂၀၁၅ NAB ပြပွဲအတွက်ပိုမိုကြီးမားသည် NAB သတင်းများ | 2015 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ - အ 2015 NAB ပြရန်အဘို့ကြီးသော
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ - အ 2015 NAB ပြရန်အဘို့ကြီးသော
Sunnyvale - ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ဆီလီကွန်ဗယ်လီ၌စည်ကားနေပါတယ်မြို့ options နဲ့မီဒီယာကဏ္ဍတွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးမြှင့်ဖို့ရည်ရွယ်သေးသည်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းဝယ်ယူလျက်ရှိသည်။ RGB ကွန်ယက်, Inc, မျိုးစုံဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေဘို့ဖြေရှင်းချက်ပေးမယ့်အဓိကကစားသမား၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကိုအများစုနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့သည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, အခြေခံအဆောက်အအုံများ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတီဗီ, ကွန်ယက်များ, ထုတ်လွှင့်စခန်းများ, Multichannel ဗီဒီယိုက programming ကိုဖြန့်ဖြူးအဖြစ်အစိုးရများနှင့်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူမီဒီယာတစ်ဦးမြင့်တက်ကြယ်ပွင့်။
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ RGB ကွန်ယက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကို subsume နှင့်သူတို့အထဲသို့၎င်း၏ ပို. ပို. ကွဲပြားခြားနားအစုစုကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ယခုသူတို့ကိုမိုဃ်းတိမ်ကို DVR, အေဒီသွင်းနှင့်ဗီဒီယိုထုပ်ပိုး၏ကိုအသုံးပြုဖို့ခွင့်ပြု, ထို IP ကို ​​cloud-based VDS ကျော်အန္တိမထိန်းချုပ်မှု (ဗီဒီယိုပေးပို့စနစ်များကို) ရှိပါတယ်ဆိုပါစို့။ RGB လက်ရှိတကမ္ဘာလုံးဆက်သွယ်ရေးများအတွက်န်ဆောင်မှုများပံ့ပိုးပေးဖြစ် 400 + နေရာများတွင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်; မြင်ယောင်ကြည့်ပါကအလွယ်တကူအဆုံးမှအဆုံးသို့ပလေးအောက်နှင့်ဖြန့်ဖြူး၏ပေးပို့၎င်း၏ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းအတူ-up, စကေးနှင့်ဤခြေရာကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒီခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွင်း၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုဖြေရှင်းချက်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့မှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံတဲ့ကြီးမားတဲ့ '' စောင် '' စိတ်ကူးပေးရကြလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာကြီးကိုမီဒီယာ၌ဤဗီဒီယိုအားနယ်ပယ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်, စဉျးစားကွညျ့မိုဃ်းတိမ်၌ကျိန်းဝပ်သည်ဟု multiscreen software ကိုအတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းအတွက်ပညတ်ပုံစံဖန်တီးရန်အနေအထားအတွက်ယခုဖြစ်ပါတယ်။ Multi-screen ကိုအကြောင်းအရာမဆိုရာအရပျသို့မဟုတ်အချိန်ဆိုပါစို့။ RGB ကွန်ယက်များ၏ဝယ်ယူအနာဂတ်မီဒီယာ၏ဤဗျာဒိတ်ရူပါရုံသည်မတစ်ဦးသော့ချက်အပိုင်းအစဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင်ပြီးသားရဲ့ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်လိုက်ဖက်မှုမရှိစေရန်နှင့်အတူသစ်ကို devices များအစဉ်အမြဲမိတ်ဆက်ဖြည့်ဆည်းရန်ဤရူပါရုံကိုအာရုံစူးစိုက်ကူညီပေးဖို့အတိအကျညာဘက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူနည်းပညာနှင့်အရောင်းလူတို့နှင့်အတူတစ်လျှောက်သစ်စာစောငျ့သိဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူရတယ်ဆောင်အစွန်းနည်းပညာဆိုပါစို့။ RGB ကဒီကိုတင်ပြမည် transcoding ကိစ္စများကြံ့ကြံ့ခံခွင့်နည်းပညာနှင့်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါတယ်။ RGB နှင့် transcoding? သူတို့ကဒီလေ ... ပေါ် လာ. ကြည့် ကိုယ့်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်အရာ RGB ကွန်ရက် '' Just-in-အချိန်ထုပ်ပိုး ( Jitpak ) ပျော်စရာအသစ်သောစကားလုံးများ၏ဘို့အလိုငှါအလွန်အမျိုးမျိုးသော streaming များကို formats ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှု-ထုတ်ပိုး pre ရန်လိုအပ်ကြောင်းကျော်လွှားစဉ်နေရာတိုင်းမှာန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင် VOD, NDVR နှင့်တီဗီအောင်ရိုးရှင်းစွာ။ သငျသညျကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေးပွောနိုငျသလဲ nice ။
RGB ကွန်ယက်ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Jef ဂရေဟမ်တွေ့မြင်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဤအသစ်ကကော်ပိုရိတ်ပြည်ထောင်စုအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ခြုံငုံတိုးတက်မှုဖို့အားသာချက်င်; "နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဆုရတီထွင်မှုပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' ရူပါရုံကိုနှင့်အရင်းအမြစ်များ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံတွင်လည်းအလွန်သောဗီဒီယိုဖြန့်ဝေရှုခင်း၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုတိုးပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' High-touch နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ, တိုးချဲ့ထောက်ခံမှု, နှင့်ဗီဒီယိုပလေးအောက်နှင့်ကွန်ရက်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အစုစုကို။ "
ကော်ပိုရိတ်အရင်းအမြစ်များဒီပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ရရှိစေသည် RGB ကွန်ယက်နည်းပညာ၏နောက်ထပ်နည်းနည်း Dynamic ကြော်ငြာ INSERT ဖြစ်ပါသည် (DAI) နည်းပညာ။ (; virtualized ဖတ်ပါ) ဒေတာစင်တာဒါကနည်းပညာကြောင့်တစ်ဦးအီအတွက်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း၌အလုပ်လုပ်တယ်, စိတျထဲတှငျပျမ်းမျှဘစ်နှုန်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ software ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလိပ်စာကြော်ငြာနဲ့ content စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစုစည်းပြီးနှင့်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ RGB ၏ဆော့ဖ်ဝဲကို enable ပါလိမ့်မယ် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ဗီဒီယိုကမီဒီယာ feed ကို streaming တစ်ဦး subscriber များအားသို့စစ်မှန်တဲ့အချိန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ခဲ့ကြကြောင်းကြော်ငြာဖန်တီးထည့်သွင်းရန်, ရှိပြီးသားဖောက်သည်ဦးစားပေးကိုက်ညီမှကူးရေးသော။ ဤသည်ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးပွါးနှင့်နောက်ထပ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူရဲ့မီဒီယာစီးမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မိုဃ်းတိမ်ကို virtual အရင်းအမြစ်များကိုအလေးပေး။ ဤသည်မှတစ်ဦးမော်ကွန်းစကေးအပေါ်အမှန်တကယ်အချိန်ပေးပို့ဘို့ကြော်ငြာ၏ Multi-client ကို personalization ခွင့်ပြု မည်သည့် အိုင်ပီတွေနဲ့ device ကို။
အင်တာနက်နှင့်ကမ္ဘာကမီဒီယာများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ပို. ပို. ပြောင်းလဲနေသောပြောင်းလဲမှုခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါဆက်သွယ်ရေးနှင့် RGB ကွန်ယက်များ၏ပေါင်းစပ်တဲ့မျိုးစုံမျက်နှာပြင်အိုင်ပီအခြေစိုက် personalizable ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေမှုစနစ်မိတ်ဆက်နေဖြင့်တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနည်းပညာကိုနောက်အဆင့်အထိ streaming ကြော်ငြာငွေရှာခြင်းအတွက်ယူခဲ့ပါသည်။ မီဒီယာစားသုံးသူယခုထိရောက်စွာသူတို့၏တပ်မက်လိုချင်သောအကြောင်းအရာဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်သည့်အချိန်တွင်မဆို, မည်သည့် device ကိုများအတွက်ဘာသာပြန်ထားသော, ရရှိနိုင်ပါသည်ရယူနိုငျပါသညျ။ က virtual အသက်တာ၏နိုင်ငံသားများလိုချင်သောအကြောင်းအရာနှင့်ပံ့ပိုးပေးရှာ DVR လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကြော်ငြာရှင်များနောက်ထပ်ကျဉ်းမြောင်းစွာပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာသွင်းနဲ့အတူတူကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုစီးကြောင်းကိုငွေရစေသောပါပြီ။ ၎င်းတို့၏ဥစ္စာဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ရှာသောကုမ္ပဏီများသည်ယခုမှသာသူတို့ရဲ့သတင်းစကား၏စံပြလက်ခံသူများအဖြစ်ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီများမှပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကအကြောင်းကြားနေကြတယ်, ရွယ်၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ကြော်ငြာများနှင့်အတူလူဦးရေရဲ့ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ barrage ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဆင်သင့်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအများကြီးပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆဖြစ်ထွန်း။
RGB ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါတစ်ဦး linear နှစျတှငျ '' စတုတ္ထကော်ပိုရိတ်မီဒီယာဝယ်ယူရေး။ တိုင်းဝယ်ယူယခင်က, ဒီကော်ပိုရေးရှင်းပြည်ထောင်စုစိတ်ကူးစိတ်သန်းဆက်သွယ်ရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာ၏တိုးဘို့ရူပါရုံကိုထွက်သယ်ဆောင်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ရန်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့။ 2014 အတွက် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ တိုးမြှင့်ဖောက်သည်တီထွင်ဖန်တီးမှု, စိတ်ကျေနပ်မှုများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအဘို့အလမ်းသစ်တွေတင်ပြနေချိန်တွင်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းမှဆန်းသစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းနည်းပညာတင်ဆက်ထားပါတယ်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နယူး ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ဘယ်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးဟိုက်ဘရစ် SDI / IP ကိုပလက်ဖောင်း 2014 အတွက်မိတ်ဆက်နည်းပညာ: မက်ဂျလန် Sdn orchestral ထိုမှတ်တိုင်အခြားကနောက်တော်သို့လိုက်လေ၏ VersioCloud စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝပေါင်းစည်းအိုင်ပီ-enabled မိုဃ်းတိမ်ကိုပလေးအောက် COTS (စီးပွားဖြစ်-off the-ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း) ပလက်ဖောင်း။ နှစ်ဦးကစက်မှုလုပ်ငန်းပထမဦးဆုံးဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကိုဆုလက်ခံရရှိအဘို့အတော်လေးမလုံလောကျကြ၏ တစ်နှစ်တာ၏စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ကုမ္ပဏီ (ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းနှင့် transcoding အမျိုးအစားအဘို့အ Frost & Sullivan,), နှင့်ကုမ္ပဏီများ 9th (!) သူဟာ Emmy ဆုချီးမြှင့် (JPEG2000 ချုံ့နည်းပညာအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါများအတွက်) ။ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ခေါင်းဆောင်မှုကိုရွေးချယ်မီဒီယာဂုဏ်သတ္တိများလက်တဆုပ်စာ၏၎င်း၏ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်နှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူယခုနှစ်ထွက်ပတ်လည်၌ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
2015 တစ်ပေါက်ကွဲသံကြီးနှင့်အတူစတင်ခဲ့ RGB ကွန်ယက်များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့် portends သောသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးကောင်းတဲ့အစိုင်အခဲခြေလျင်သွားသောအရာတို့ကိုတယ်သိရသည်။ မိုဃ်းတိမ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းဆက်သွယ်ရေးဝေစုအတွက်ရာသီဥတုနေသာခြင်းနှင့်ရှင်းပါတယ်။ အဆိုပါ 2702 မှာ၎င်းတို့၏တဲ (N2015) ကလွှဲဖို့သေချာပါစေ NAB ပြရန်သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် store မှာရှိသည်ရိုင်းစီးမှာ peek ယူပါ။ (လုယူသောသူသတိပေးချက်; စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဂိမ်း-Changer) ။
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ကော်ပိုရေးရှင်း, 185 နိုင်ငံများတွင် spanning မီဒီယာကွန်ရက်များတာဝန်ထမ်းဆောင်သည်ဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ, ထုတ်လွှင့်စခန်းများ, On-line ကိုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်လုပ်ငန်းစျေးကွက်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာ့ဗီဒီယိုအားလိုင်းများ၏ထက်ဝက်ခန့်ထက်ပိုမို3သန်းမှတဆင့်ဖြတ်သန်း ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ကမ္ဘာတဝှမ်းချထားထုတ်ကုန်။ စဉျးစားကွညျ့ဆက်သွယ်ရေးအရှိဆုံးပြည့်စုံအဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်နှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်အိုင်ပီ, ကမ္ဘာပေါ်မှာမိုဃ်းတိမ်ကို-enabled, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ကွန်ယက်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများကိုကယ်နှုတ်သောတီထွင်ဆန်းသစ်နေသည်။ အလည်အပတ် www.imaginecommunications.com ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, နှင့် Twitter @imagine_comms အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။
2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 2015 NAB ပြရန် ကြော်ငြာ INSERT အသံလွှင်း မိုဃ်းတိမ်ကို DVR အကြောင်းအရာ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ IP ကို ​​cloud-based VDS (ဗီဒီယိုပေးပို့စနစ်များ) Show ကို 2014 NAB RGB ကွန်ယက် ဗွီဒီယိုကိုထုတ်ပိုး 2015-02-27
ယခင်: Glookast - အကော်စေသည်ခညျြနှောငျ! 2015 NAB Show မှာသူတို့ကိုကြည့်ရှုပါ
နောက်တစ်ခု: လိမ္မော်ရောင်ပြင်သစ် Viaccess-Orcas ရဲ့ Voyages ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ Multiscreen ချိတ်ဆက်ပလက်ဖောင်းဖြန့်ချထား